Apple Inobata iMessage uye Renewable Energy muNew Ad | IPhone nhau
Isu tanga tichitaura kwemazuva akati wandei nezveZuva repasi iro richapembererwa musi waApril 24 uye kufarira kuri kuiswa naApple muchiitiko ichi. Isu tinongofanirwa kudzungaira kuburikidza neApp Store kuti tione nhamba hombe yezvikamu zvitsva zviripo izvozvi tora rumwe ruzivo nezve zuva rino, maficha anoshanda pamwe neWWF ...
Asi, sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, akatanga zvakare shambadziro nyowani iyo yaanotaura nezve iMessage uye simba rinowedzerwazve. Sezvatinogona kuona mune chiziviso, icho chandinosiya pazasi chiziviso chinotsanangura kwatiri kushanda kwesimba rakawanda iro Apple rinoshandisa munzvimbo dzaro dhata, iyo isiri imwe simba rinowedzerwazve.
Kutenda kune icho chokwadi chekuti sosi yesimba inovandudzwa pese patinotumira meseji kuburikidza nekushandisa kwayo, isu tiri kubatsira mukuchengetedza nharaunda uye tinoratidza kuremekedza kwatinoita nyika nezvose zvakakomberedza. Pakupera kwevhidhiyo iyi, tinogona zvakare kuona iyo logo nyowani iyo Apple iri kushandisa panguva yemushandirapamwe wekuzivisa, uko hunde yeapuro inoratidzwa mune girini, senge maApple Stores mazhinji pasirese mumazuva ano.
Tim Cook agara achitaura izvozvo iwe ungade kusiya nyika zvirinani kupfuura iwe zvawakaiwanaNekudaro, iye achiwedzera kuisa pfungwa pakushambadzira kufambira mberi uye kubudirira kwaanoita mune izvi, semashoko ekupedzisira, kwaakatizivisa nezvekudzokorodza maitiro ezvose zvishandiso izvo zvisingachabatsiri. Iyo Campus 2 nyowani iri kuvakwa parizvino uye ichaisa mahofisi matsva ekambani kubva gore rinouya, ichawana simba rayo rese kubva kumagetsi anovandudzwa, chaizvo kubva kumatanho ezuva ari pamusoro pavo sekukuratidza kwatakaita mumavhidhiyo akasiyana iyo yatakaburitsa pane kufambira mberi kwekuvakwa kwenzvimbo dzemberi dzeApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple Inobata iMessage uye Renewable Energy muNew Ad
Tim Cook zvakare pakati pevanhu zana vane simba kwazvo pasirese